Vaovao - Ny fanavaozana vaovao amin'ny tranokala ofisialin'ny Sinoa Lesite dia an-tserasera
Amin'ny maha-marika fanta-daza eo amin'ny indostria, i Lesite dia nifikitra hatrany tamin'ny filozofian'ny fampandrosoana ny orinasa "mitady ny fahamarinana sy ny maha-pragmatika, ny mpisava lalana, ny fiezahana ho amin'ny tsara indrindra, ary ny fanompoana ny mpanjifa", ary tsy mitsahatra manavao sy mamerina ny vokatra Lesite miaraka amin'ny fanahin'ny asa tanana. ho an'ny hatsarana, ary miezaka ny hanome mpanjifa manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny lasantsy plastika mifaninana kokoa sy ny fitaovana fanafanana indostrialy sy vahaolana. Taorian'ny 15 taona nitombo sy niova, tsy vitan'ny hoe nanova ny sariny marika ny Lesite, fa androany, natomboka tsara tarehy ny tranokala ofisialy sinoa vao nohavaozina (URL: https://www.lesite.com.cn).
Ezaka mamorona vohikala ofisialy vaovao hanatsarana tanteraka ny traikefan'ny mpampiasa
Mba hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa, ny mpikambana ao amin'ny ekipan'ny Lesite dia nanao drafitra, famolavolana, fampandrosoana ary fitsapana, ary farany dia namorona tranonkala multifunctional izay mampiditra ny fampisehoana vokatra, vaovao momba ny vaovao, rohy amin'ny media sosialy, fifampidinihana an-tserasera ary hafatra.
Ny tranonkala ofisialin'ny vaovao naseho tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy fanitsiana ampahany sy fanatsarana ny tranonkala ofisialin'ny taloha, fa namaritra indray ny fiantraikan'ny tranonkala ofisialin'ny Lesite amin'ny ankapobeny. Rehefa avy niditra tao amin'ny pejy fandraisana ireo mpampiasa dia ho hitan'ny mpampiasa fa sahy nandamina sy nanadio ny votoatin'ny fizarana araka ny ifantohan'ny mpampiasa i Lesite, ka mahatonga ny fomba interface tsara ho mamelombelona kokoa, ny rafitry ny rafitra dia mazava kokoa sy mora azo kokoa, ny fanolorana fampahalalana dia intuitive kokoa. , ary ny fomba fifandraisana dia intuitive kokoa. Fampisehoana vokatra isan-karazany, telo dimensions kokoa, mety ho an'ny mpampiasa hahatakatra haingana ny firafitry ny vokatra sy ny fampahalalana momba ny marika Lesite. Ny fanitsiana ara-tsiansa amin'ny layout, ny famolavolana drafitra ary ny firafitry ny atiny dia tsy vitan'ny hoe feno tsiro, fa akaiky koa amin'ny tena renivohitra
Tranonkala ofisialy vaovao, misongadina vaovao, mitondra anao amin'ny dia vaovao
Betsaka ny zava-nisongadina amin'ny tranokala ofisialy vaovao. Aorian'ny fidirana ao amin'ny tranokala ofisialy dia afaka mahatsapa fiovana hita maso vaovao ny mpampiasa. Ny mainty, fotsy ary mena no lokon'ny maso lehibe indrindra amin'ny tranokala ofisialin'ny tranonkala, izay manakoako tanteraka ny LOGO Lesite, miantoka ny firaisan'ny endrika Lesite VI. firaisana ara-nofo. Ny firafitry ny pejy amin'ny ankapobeny dia mitombina kokoa, matanjaka kokoa ny fiantraikan'ny maso, ary kanto kokoa ny fomba.
Ny sary vokatra telo lehibe ao amin'ny pejy fandraisana dia aseho amin'ny carousel, izay mety ho an'ny mpampiasa mba hahatakatra haingana ny vokatra malaza be fivarotana Lesite. Ny vohikala ofisialy vaovao dia mameno ny fanasokajiana sy fanatsarana votoaty, ary ny sokajy vokatra dia zaraina amin'ny fiasa sy fampiharana. Mitadiava amin'ny alàlan'ny tsindry iray, ary afaka mamaky fampahalalana marina ianao. Ho an'ny vokatra tsirairay,
Lesite dia manome ny sarin'ny vokatra tena izy sy ny tombony amin'ny antsipiriany ary ny fampidirana parameter, mba hahafahan'ny mpanjifa mianatra momba ny vokatra Lester rehetra an-tserasera nefa tsy miala ao an-trano. Ny tranonkala ofisialin'ny vaovao dia nanao fitsambikinana lehibe teo amin'ny lafiny fisehon'ny lamina sy ny fampandehanana moramora ny traikefan'ny mpanjifa.
Mamaha ny fironana vaovao amin'ny tranokala, karazana kilalao ifanakalozan-kevitra no miandry anao
Amin'ity fanavaozana tranonkala ofisialy ity, ny Lesite dia mandinika tanteraka ny fahazaran'ny mpisera isan'andro ihany koa. Ny vohikala ofisialy vao natolotra dia tsy mifanaraka amin'ny terminal PC sy finday ihany, fa ahafahanao manaraka ny kaonty ofisialy WeChat orinasa an'ny Lesite sy ny kaontin'ny orinasa amin'ny tsindry iray amin'ny tranokala. Weibo sy Toutiao ankehitriny dia manome fomba haingana sy mora hianarana bebe kokoa momba ny mombamomba ny orinasa sy ny fironana Lesite. Amin'ny ho avy, hampifandray amin'ny maody video fohy toa an'i Douyin sy Tencent ihany koa ny vohikala, ary ireo mpampiasa dia ho afaka hianatra bebe kokoa momba ny asa tanana amin'ny vokatra sy ny endri-javatra amin'ny fomba intuitive kokoa sy amin'ny lafiny telo amin'ny alàlan'ny fanosehana horonan-tsary fohy. Ireo mpampiasa izay mividy vokatra dia afaka mizara horonantsary fohy momba ny fampiasana ny vokatra miaraka amin'ny marika vokatra amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fifandraisana sy mailaka omena ao amin'ny tranokala, ary manana fifandraisana mahomby kokoa amin'ny marika Lesite.
Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fivoaran'ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao haingana, ny Lesite dia mandray ny vokatra sy ny mpampiasa ho fototra, manatsara hatrany ny traikefa amin'ny fikarohana sy ny fampiasana ny tranokala ofisialy, ary manangana sehatra fifandraisana mahomby sy fampisehoana ho an'ny marika, vokatra ary mpampiasa. Amin'izay fotoana izay ihany koa, ny Interaction isan-karazany dia nampiditra hery vaovao ho amin'ny fampandrosoana ny marika.